FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLDOG MAIMAIM-POANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bulldog maimaim-poana
Alika miteraka Bulldog / French Bulldog
Tug the Bulldog Free-Lance amin'ny 2 taona— 'Milanja 55 pounds izy ary 3 metatra ny halavany ary 16 santimetatra eo an-tampon'ny lohany. Izy dia Bulldog frantsay / anglisy ary alika tena mahafaly amin'izay mankafy ny diany. Tena tia be ary tia milalao koa. Mamorona zava-dratsy maro izy raha avela irery ao an-trano, ka entinay any amin'ny toeram-pitaizana zaza iray izay hahafahany mandoro angovo efa voaorina. '
Bulldog tsy miankina
Anglisy bantam bulldog
Ny alika foxy Russell dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny English Bulldog ary ny Bulldog frantsay . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Bulldog tsy andoavam-bola
Drafitra mpamorona endrika = Bulldog maimaim-poana
Mpanoratra International Canine Registry®= Anglisy Bantam Bulldog (F1)
Hetti the Freelance Bulldog amin'ny faha-4 taonany— 'Ity dia Henrietta na' Hetti '. Izy dia Bulldog Free-lance 4 taona. Tiany ny matory, milalao ary mifampikasoka. Tena sariaka izy, olona be fitiavana sy alika hafa. '
Emmy the Freelance Bulldog pup amin'ny herinandro 10 sy 6 lbs.
'Ity no alika Pounder. 50% Bulldog frantsay izy, Bulldog anglisy 50%. Tia be izy ary tena ratsy toetra koa. Milanja 55 pounds eo ho eo izy amin'ny taona 4. '
Tug the Free-Lance Bulldog amin'ny faha-2 taonany, milanja 55 pounds, ho any doggie mitaiza zaza, tonga lafatra ho an'ny alika miasa ny tompony!
Bulldog amerikana 1 taona
Tug the Free-Lance Bulldog amin'ny 2 taona, milanja 55 pounds
'Macy, Bulldog Frantsay / Anglisy 50/50 avy any Angletera 18 volana ary mbola mpampihorohoro!'
Macy, Bulldog tsy andoavam-bola (alika alikaola Bulldog frantsay / alika Bulldog frantsay) alika kely
Macy, alika malalaka Free-Lance (alika kely afangaro Bulldog frantsay) alika kely
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bulldog Free-Lance
Sary Bulldog Free-Lance 1
rat terrier chihuahua mifangaro lanja antonony
sarina bulldog amerikana vehivavy
alika heeler manga feno rà feno
retriever volamena Mix amin'ny Chow